Page 379 – Baganthar
မာရ်နတ် တကယ်ရှိသလားနှင့် မာရ်နတ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ အပြည့်အစုံ
Bagan Thar Sep 08
သိပ် တန်ဖိုး ရှိတဲ့ ပို့စ်လေး ပါ မာရ်နတ် ဆိုတာ အခုမှ စုံစုံ လင်လင် သိခွင့် ရတာ အကျိုးများပါတယ်။ ၁-မာရ်ငါးပါး ဆိုတာ မာရ်နတ် ငါးယောက် ကိုပြောတာလား ?? ၂-ဘုရား မရှိတော့ပေမယ့် သိကြားမင်း တို့ နတ်ပြည်ကို ဘာလို့ သွား မသိမ်းလဲ ?? ၃-ဘိက္ခုနီ သာသနာကို ကျတော့ ဘာလို့ မနှောက်ယှက်ခဲ့ တာလဲ ?? ...
ထူးခြားသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးသော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် အိုင်စတိုင်း၏ ဦးနှောက် ထုတ်ယူခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပေသည်
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ကုန်းဘောင်မင်းတပါး
မင်းတုန်းမင်းဟု ဆိုလိုက်လျှင် အများစုက စည်းစိမ်အလွန်ခံစားတဲ့မင်း ၊ မိဖုရားအမြောက်အများယူသူ မင်း အဖြစ် သာသိထားကြပြီး တိုင်းပြည်ရေးအတွက် ဘာမှမလုပ်ဆောင်သူဟု ထင်ထားကြသည်။ တကယ်တော့ မင်းတုန်းမင်းသည် နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ ဘာသာရေး ၊ ပညာရေးတို့ကို အမြှော်အမြင်ကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ သော မင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့်လည်းလေ့လာသူများက မင်းတုန်းမင်းအား ကုန်းဘောင်ခေတ် ထိပ်တန်း မင်းတစ်ပါး အဖြစ် အလေးထားကြခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် မန္တလေးရတနာပုံ ပထမမြို့တည်မင်းအဖြစ်လည်ကောင်း ...
မိသားစုထက် တိုင်းပြည်ကို ပိုချစ်တဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးဗထူးရဲ့ နောက်ဆုံးစကား
Bagan Thar Sep 04
ဗိုလ်မှူးကြီးဗထူးဆိုလျှင် ဂျပန်ဖက်ဆစ် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးကာလ ၊ မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော် ၊ အထက်မြန်မာ ပြည်တိုင်း၊ တိုင်းမှူး အဖြစ်သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ ရှမ်းပြည်နယ် တယ်လူးစခန်း၌ ငှက်ဖျားရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွား ခဲ့ကြောင်း လည်း သိကြ မှာပါ။ ထားဝယ်ခရိုင် လေးသွန်းခံရွာဇာတိဖြစ်သူ ဗိုလ်ဗထူးဟာ ခုနှစ်တန်းအထိ ကျောင်းတက်ခဲ့ပြီး ရှစ်တန်းအရောက် မှာတော့ အလုပ်လုပ်ချင်တာကြောင့် ကျောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မိဘ သူငယ်ချင်းများက ဖျောင်းဖျသော်လည်း မည်သို့မျှမရ၍ လက်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်။ ဟိန်းဒါးသတ္တုတွင်းမှာ အလုပ်ဝင်ခဲ့ပြီး ရိုးသားကြိုးစားခြင်း ...
မြန်မာ့အဖိုးတန်ရတနာ ကျောက်စိမ်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကျောက်စိမ်းဟု ပြောဆိုခေါ်ဝေါ်နေကြသော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ဂျေဒိုက် (Jadeite) နှင့် နက်ဖရိုက် (Nephrite) ဟူ၍ ကျောက်စိမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ ဤနှစ်မျိုးသည် အမြင်အားဖြင့် ခပ်ဆင်ဆင် တူသော်လည်း စင်စစ်တွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လုံးဝ ကွဲပြားခြားနားသည်။ ယင်းကွဲပြားမှုကို ပြင်သစ်လူမျိုး သိပ္ပံပညာရှင် ဒမား (Damur) ဆိုသူက စနစ်တကျ ခွဲခြားပြသခဲ့၏။ အဆိုပါကျောက်စိမ်းနှစ်မျိုးတွင် ဂျေဒိုက်ကျောက်စိမ်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်လှပပြီး ပိုရှားပါးသည့် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ကျောက်စိမ်းကို သမိုင်းမတင်မီ ခေတ်များကပင် လူသားတို့ ...
လူငယ်တွေအတွက် ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းရဲ့ အကြံပြုချက် (၅) ချက်
လူငယ်တွေအပေါ် ဆရာကြီးဦးအောင်သင်း အကြံပေးတဲ့ အကြံပြုချက် (၅) ချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်- ၁။ ငါမုချကြီးပွားအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိဋ္ဌာန်ထားပါ လူငယ်တယောက်ဟာ အရေးကြီးဆုံးအချက်က ငါဟာမုချကြီးပွားအောင်မြင်နေရမယ် ဆိုတဲ့ အဓိဋ္ဌာန် ခိုင်ခိုင် မာမာချဖို့ အရေးကြီးတယ်။ များသောအားဖြင့် လူငယ်တွေဟာ အမှတ်မထင် အမှတ်မထင်လေးတွေ နေကြ တယ်။ အဲဒီလို ခိုင်ခိုင်မာမာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့သလား။ ဝေေ၀၀ါးဝါးလေး ပေါ့ အမှတ်မထင် ပဲရှိတတ်တယ်။ ...
ကလေးတွေ မီးဖိုချောင် ဝင်ခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများ
ကလေးတွေ အတွက် မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ပညာရစရာတွေ ရှိသည်။ ကလေးတွေကို ထမင်းကျွေးရတာလောက် အာပေါက်သော အလုပ်၊ ပင်ပန်းသော အလုပ်မျိုး ရှိမည်မထင်။ သို့သော် ကလေးတွေကို မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ချက်တာ ပြုတ်တာ ၀ိုင်းကူလုပ်ခိုင်းကြည့်ပါ။ သူတို့ချက်ထားတာကို အားရပါးရ စားကြပါလိမ့်မည်။ နောက်ထပ် အကျိုးကျေးဇူးကား ချက်တတ် ပြုတ်တတ်လာမည်၊ အရသာသစ်တွေ ထိတွေ့ ခံစားတတ်လာမည်။ တီထွင်ဖန်တီး ဥာဏ်တွေ ထက်သန်လာမည်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ချက်စရာ ပြုတ်စရာတွေကို ဘယ်လိုတွဲစပ်ရမယ်၊ ...
ပထမဆုံး မြန်မာ့ အမျိုးသမီး ရှေ့နေ (သို့မဟုတ်) ဒေါ်ဖွားမှီ
ဒေါ်ဖွားမှီသည် ရန်ကုန်မြို့ ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်ဝန် ဦးထွန်းသော်နှင့် ဒေါ်သဲနုတို့၏ သားသမီး ငါးယောက်အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်၍ ၁၉၀၂ ခုနှစ်တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်က စိန်မေရီဒိုင်အိုနှင့် ရန်ကုန်ကောလိပ်မှ အိုင်အေအောင်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ဥပဒေပညာ သင်နေကြသော မြန်မာ ပညာတော်သင်တွေမှာ အင်္ဂလန်တွင် အတော်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၂၃ ခုနှစ်က ရှေ့နေအဖြစ် ရုံးတော်များ၌ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင်ကြားနေသော ယောက်ျားများ နှင့်အတူ အင်္ဂလန်ပြည်သူ တစ်ဦးနှစ်ဦးသာ ရှိသေးသည့် ...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ အတွက် အခက်ခဲဆုံးနိုင်ငံ ( ၁၀ ) နိုင်ငံ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေး၊ ကလေးသူငယ်အကာအကွယ်ပေးရေး နှင့် ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်ပွားနှုန်းတို့အရ ကလေးသူငယ်နဲ့ မိခင်တို့အတွက် အဆိုးဆုံး ၁၀ နိုင်ငံကိုဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ The Central African Republic ထိုနိုင်ငံဟာ စစ်တမ်းတွေအရ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေအတွက်အဆိုးဆုံးနေရာတွေထဲကတခုပါ။ အာဖရိကအလယ်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ထိုနိုင်ငံဟာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပညာရေးစနစ်အဆိုးဆုံး နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခါပါ။ ပညာရေးအသုံးစရိတ်ဟာ GDP ရဲ့ 1.2 % သာရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအဆိုးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ တတိယ ချိတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မိသားစုတစ်စုအတွက် ရပ်တည်ရုန်းကန်ဖို့ ...
#ရွှေစည်းခုံစေတီတော်။ ။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ပထမဝိဇယဗာဟုမင်းကြီးသည် အနော်ရထာမင်းအား ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ ပိဋကတ်သုံးပုံနှင့် ဆင်ဖြူတော်တစ်စီး အကူအညီတောင်ခံခဲ့သည်။ အနော်ရထာမင်းမှ ကူညီသဖြင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်အစစ်မှ ပွားထားသော စွယ်တော်ပွားအား အနော်ရထာမင်းအား ဓမ္မလက်ဆောင် ပြန်ပေးခဲ့သည်။ ညောင်ဦးမြို့မှ အနောက်တောင်ဖက်ရှိ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဖူးတွင် သိရိလင်္ကာမှ စွယ်တော်ပွားအား ဌာပနာပြီး ဥာဏ်တော် ၁၆၀ပေ၊ ဖိနပ်တော်အကျယ် ၁၆၀ပေ ရှိသော ရွှေစည်းခုံစေတီကို တည်ထားကိုးကွယ်သည်။ အနော်ရထာမင်းလက်ထက်တွင် စတည်သော ရွှေစည်းခုံစေတီမှာ ကျန်စစ်သားမင်းလက်ထက်တွင် ပြီးဆုံးအောင် ...